FA-da oo laga yaabo inay mar kale ganaax gorada u galiyan Sir Alex. – SBC
FA-da oo laga yaabo inay mar kale ganaax gorada u galiyan Sir Alex.
Xiriirka ciyaaraha kubada cagta wadanka Ingiriiska Football Association FA ayaa laga cabsi in mar kale ay ganaax dusha u saarana tababaraha kooxda Manchester United Sir Alex Furguson ka dib markii la sheegay in uu ka sii hadley garsoorihii dhexdhexaadinayey ciyaartii Man U & Chelsea ee 8-dii bishan May ka dhacdey garoonka Shayaadiinta cas cas ee Old Trafford.
Ciyaartaasi intii aanay dhicin oo FA-duna shaacisey in uu dhexdhexaadin doono garsoore Howard Webb oo ahaa garsoorihii hayey ciyaartii final-ka ee koobka aduunka ayaa Sir Alex wuxuu ku tilmaamay Howard Webb “Ninka ugu wanaagsan ee shaqadaasi ku fiican”.
“Waxaan helaynaa garoosaraha (Albiitaraha) ugu wanaagsan, shakina kuma jiro in uu yahay, lakaiin in aynu la kulano go’aan qaldan waa mida ugu weyn ee aan ka casbi qabno” ayuu yiri Sir Alex oo ka hadlayey magacaabista Howard Webb in uu dhexdhexaadiyo ciyaartii Manchester United & Chelsea oo Man United ay ku garaacdey Chelsea 2-0.
Madaxda FA-da ayaa sheegay in tababaraha Old Trafford uu ku xadgudbey xeerka lambar E3 oo ah in tababaraaasha kooxaha aanay ka hadli karin arimaha garsoorayaasha ka hor ciyaarta, sharcigaasi oo bishii October loo qaybiyey tababarayaasha kooxaha Ingiriiska.
Qoraal eedeyn ah oo loo gudbiyey Sir Alex ayaa la sheegay in ay u muuqanayso in maamulka Man United uu iska indho tiray dharbaaxadii ganaax ee lagu amray inaanu imaan karin shan kulan oo ka mid ahaa Premiership-ka & FA-ga.
Qoraal jawaab ah oo maamulka Manchester United ay u soo gudbiyeen FA-ga ayey ku sheegeen in ay tahay hawlaha Tababaraha arimaha lagu soo eedeeyey Sir Alex ee dambiga laga dhigayo, waxaana ay sheegeen in ay tahay in aanu wax dambi ah laheyn.
Go’aan inay soo gaaraan maamulka Man United ayaa ku ekaa shaley 4-tii galabnino waxaana haatan la sheegayaa in gudiga adaabta ee FA-ga ay haatan dhageysanayaan dacwadaha anshaxa la xiriira ee lagu soo oogay Sir Alex.
Sir Alex ayaa la sheegay in laga dalbadey in dhageysi shakshi ah uu uga soo qayb galo eedeymaha dhanka anshaxa la xiriira ee lagu soo oogay, laakiin waxaa la sheegay in uu iska indho tiray dalabkaasi uuna sheegay inaanu laheyn wax dambi ah, iyadoo la xaqiijiyey in dhageysiga dacwadaha dhanka anshaxa la qaadayo isagoo maqan Sir Alex Ferguson.
Sir Alex ayaa ka dib markii afka uu la galay oo uu ka wax sheegay garsoore Martin Atkinson oo ahaa dhexdhexaadiyihii ciyaartii 1-dii bishii March ee sanadkan ka dhacdey garoonka Chelsea ee Man United lagaga badiyey 2-1 ayaa lagu ganaxay shan kulan oo aanu cagta soo dhigi karin seeraha tababarayaasha kooxaha ka maamulaan xiliga ay ciyaarayso kooxdoodi.